IINGCAMANGO ZEPATIO WIND BLOCK (IZIKRINI, IISHADADE KUNYE NEEDEFLECTORS) - IIPATIO KUNYE NEEDEKSI
Eyona Iipatio Kunye Needeksi Iingcamango zePatio Wind Block (Izikrini, iiShadade kunye neeDeflectors)
Nantsi igalari yethu yeengcamango zebhloko yomoya wepatio kubandakanya indlela yokuvimba umoya usebenzisa iindlela ezahlukeneyo zoyilo. Ipatio yangasemva iyindawo efanelekileyo yokuhlala. I-barbecues ehlotyeni, isidlo sasemini kunye nabahlobo ekwindla kunye nekomityi yekofu engafanelekanga ngexesha lekhephu ebusika yenza ipatiyo indawo yokuhlanganisana lonke ixesha.
Ngaphandle kwezo ntsuku zisahleliyo, nakuphi na ukuphazamiseka kwemozulu kuhlala kubangela iimeko zomoya. Umoya ovuthuzayo unokumkeleka, kodwa xa umoya ovuthuzayo usasaza i-tableware, i-napkins, imiqamelo kunye neminye imihombiso yomgangatho, ibhloko yomoya yepatio ngumbono olungileyo.
Abantu abaninzi bakhetha ukungafaki iipatio zabo ukugcina ukuziva kwangaphandle kwaye bonwabele umbono ojikeleze bona. Kwesi sikhokelo, siza kuphonononga izimvo zebhloko yomoya ukuze unqume ukuba loluphi ukhetho olulungele wena.
Ungawuthintela njani umoya kwiPatio
Ucingo lweBlock block
IPatio Wind Deflector
Iimpawu zangaphandle zokuVimbela umoya
Qengqa uKhuselo loMoya
Cacisa iiVinyl Curtains
IPlexiglass kunye neeNqobo zomoya zeGlasi
Ibhloko yoMoya ephathekayo
Idisk Wind Screen
Iibhloko zoMoya zeNdalo
Ukuthintela umoya kwipatio okanye ibhalkhoni yegumbi kuvumela abanini khaya nabahlali ithuba lokonwabela umoya omtsha. Nangona kunjalo, imozulu embi inokuzisa umoya ovuthuzayo ophelisa ulonwabo.
Ezinye iindawo zinokuba nomoya kuba zibekwe kwintlambo phakathi kweentaba ezimbini okanye zibekwe kunxweme lolwandle. Ukufumana indlela elula nefanelekileyo yokuthintela umoya kuthetha ixesha elininzi ukonwabela ipatio okanye ibhalkhoni.
Jonga olu cingo lumoya lwepatio apha Amazon [ikhonkco elixhasiweyo]
Apha ngezantsi kukho iindlela ezininzi kunye nemibono onokuyisebenzisa ukukhusela emoyeni. Ngamnye uxhomekeke kuhlobo lwepatio, indawo ejikelezileyo, kunye nokuba ungakanani umoya umninikhaya ofuna ukuwuthintela.
Iibhloko zomoya zocingo zeenkuni ziza njengeepaneli ezenziwe ngomthi ezinokusikwa kwipateni yokulinganisa okanye yobugcisa. Umoya kunye nokukhanya kuyavunyelwa kungene, kodwa umoya onamandla uyagcinwa.
Ucingo olubiyelweyo luya kusebenza njengebhloko yomoya kunye nemfihlo yokubonelela ngokwamkela indawo yepatio yekofu yakusasa. Iingcingo zebloko zomoya zenziwe ngomthi okanye iiplanga zomthi ezihlanganisiweyo, ezivumela imibala emininzi kunye neepateni.
Iingcingo eziqinileyo azisebenzi kakuhle njengesixhobo somoya. Umoya uya kuvuthuza ubhekise kumphezulu oqinileyo kwaye uhambe ngaphezulu nangaphezulu ukuze wehle umva uye kwelinye icala. Ukubiyela i-lattice, ucingo oluthandwayo, okanye i-bamboo zonke zenza ukhetho olukhulu lothango lomoya.
I-deflector yomoya wepatiyo akufuneki ukuba iqhotyoshelwe kwipatio. Nje ukuba umninikhaya abone apho uvela khona umoya, i-deflector yomoya inokumiswa ukunqanda umoya ukuba ungafiki kwipatiyo.
Iiphaneli zocingo zinokucwangciswa ngokuzimeleyo kwezinye iingcingo kwaye kude nepatio apho kuvela khona umoya.
Amatyholo anje ngearborvitaes akhula aba ludonga olukhulu lwendalo, kwaye imithi enjenge-oki, i-maple trees, kunye nemithi yepayini isebenza kakuhle. Ngelixa aba baphambukeli bendalo bekhula, abaninimzi banokusebenzisa iipaneli zokuxhoma okwexeshana okanye izikrini ukuthintela umoya.
Iimpawu zeepatiyo zenza iibhloko zomoya ezinkulu kwaye zongeze umnxeba wokuhonjiswa kuyilo lwepatio. Ukhetho olwahlukileyo lwendwangu lubandakanya izinto eziqinileyo, ezomeleleyo, okanye ezilukiweyo.
Ukuthintela umoya ngokufuthi kuza nothango lokuthintela ukubabetha emoyeni kwaye babonelele ngesibonelelo esongezelelweyo ngokuthintela imvula elula okanye ikhephu. Bona Okuninzi Iindidi zeepatio ezivalekileyo Apha.
Imithunzi inokuxhoma kwizixhobo ezilula ezinokuthathwa xa zingasetyenziswanga okanye zifakelwe njengokhuseleko lomoya. Abavelisi banikezela ngee-shades ezenziwe ukuba zifakelwe ipatio engaphandle.
Ukuphakamisa okanye ukwehlisa i-shades kwenziwa ngee-pulleys, okanye iipaneli zinokufakwa kulawulo lombane. Ukuqengqeleka kukhuseleko lomoya kubonelela ngenketho efanelekileyo xa umoya uzolile.
Mhlawumbi ubonile amakhethini acacileyo e-vinyl asetyenziswa kwiivenkile kunye nemivalo enezihlalo zangaphandle. Ngokufana neetarps ezinkulu ezicacileyo, ezi ndawo ze-vinyl azinamanzi kwaye ziza ngobukhulu obahlukeneyo ngokuxhomekeke kwimfuno yakho.
Cacisa i-vinyl / i-pvc amalengalenga ahlala enganyangeki kwimitha ye-UV kwaye uhlala ephathwa nge-anti-microbial coating. Zihlala zithengiswa nge-20 mil okanye 30 mil ubukhulu. Ikhethini elingqingqwa kucetyiswa ukuba linganyangeki ngenxa yemozulu ebandayo.
Jonga eli likhethini licacileyo lepati Amazon [ikhonkco elixhasiweyo]
Ezi ziza nee-grommets ukuze ubanike kwi-patio yakho okanye kwiveranda usebenzisa iihuku okanye ezinye iintlobo zokubopha. Ukuqinisekisa ukuba abayenzi ingxolo eninzi kwaye bahlala bekhuselekile kufuneka banamathele phezulu nasezantsi.
Iindleko zokuthenga iikhethini ezicacileyo ze-vinyl zibiza ixabiso eliphantsi nge- $ 75 ukuya kwi-100 yeedola nge-8ft ngephaneli ye-8ft.
Ipatio inokujamelana nolwandle kunye nolwandle okanye inikeze umbono omuhle weentaba. Kwimeko enjalo, isenokungabi ngumbono olungileyo ukusebenzisa isitshingitshane somoya esiphazamisa ubuhle bendawo nokuba sisixa esincinci, njengezikrini.
Cacisa iglasi okanye iipaneli ze-plexiglass zibonelela ngesiphene somoya ukuba nje ziphezulu ngokwaneleyo ukugcina umoya ungabuyeli ezantsi kwipatio. Ukuba iglasi okanye iipaneli ze-plexiglass zibaleka ukusuka kumgangatho wepatio ukuya phezulu kuphahla lwomoya, umoya uya kujoliswa ngaphezulu kophahla kwaye kude nepatio.
Ibhloko yomoya ephathekayo lukhetho lwethutyana olwenziwe kwiiphaneli ezigutyungelwe ngezinto ezahlukeneyo.
Ezi paneli zihlala zityhutyha isakhelo sepatio. Izinto ezisebenza kakuhle zibandakanya isikrini, ilaphu elipheleleyo, umqhaphu, i-burlap, okanye ukhuselo kwimozulu embi, njengeplastiki ecacileyo.
Iibhloko zomoya ezizimeleyo ezisebenza ngokuzimeleyo ziyasebenza kwaye zinokucwangciswa ukuvimba umoya ovela kulo naliphi na icala lepatiyo. Abanini bamakhaya bangasebenzisa izixhobo zokuyila ukuxhasa ukuhonjiswa kwepatio.
Jonga le bhloko yethala lomoya kwiipatio Amazon [ikhonkco elixhasiweyo]
Isikrini somoya somgangatho sidityaniswa kusetyenziswa amaplanga okhoyo okanye isinyithi isakhelo sesakhelo kwaye sigutyungelwe ngezinto zomnatha ezomeleleyo. Ukuhlolwa kwesikrini kunokuqhutyelwa kwi-patio yonke okanye kumacala aqhelekileyo afumana umoya.
Iingcingo zebloko zomoya ziphinda kabini njengesikrini sabucala ngokuxhomekeka kuhlobo lwescreen esisetyenzisiweyo. Abavelisi banikezela ngeendlela ezikhethiweyo zebhloko zomoya ezibonelela ngokhetho olufana nombala, ubukhulu, izinto eziphathekayo, izinto ezinokumelana ne-UV kunye nesikrini sabucala.
Izikrini zomoya wedesika zezona ntlobo zifikelelekayo kwiibhloko zomoya zeepatio.
ubudlelwane obuhle bomfana wakho
Izityalo kunye nemithi yindlela efanelekileyo yokusebenzisa i-block blocker yendalo. Izihlahla ezityalwe zijikeleze ipatio zenza uthango oluhle.
Zigcine zinciphisiwe malunga ne-3 ukuya kwi-4 yeenyawo ukuphakama, ukuze zingathinteli umbono, kodwa ziyayikhusela ipatio kwimimoya enamandla. IiHedges zibonelela ngenkangeleko yeklasikhi nakwiyadi.
Ingca ende okanye uqalo lungumqobo kwiintsuku ezinomoya kwaye zenza umxholo wetropiki kumakhaya akwiindawo ezifudumeleyo.
Ukuba ipatio ifreyimu, i-trellises kunye nezityalo zemithi yenza ukongeza okuhle kulungiso lomhlaba, kwaye ngokusebenzisa i-trellis, izityalo zingenziwa ukuba zikhule kwiindawo ezivulekileyo zepatio ukunciphisa umoya.
Olunye ukhetho lokuhombisa kukusebenzisa iiplantara ezinkulu ezinezityalo ezinde ezibekwe zijikeleze ipherimitha. Ingca ende kunye nenqanaba elineentyatyambo zezityalo zenza ingxelo emangalisayo kwaye isikwa ngumoya.
Imithi eyinzalelwane yommandla yenza ukongezwa okuhle kuyo nayiphi na iyadi, inceda ukugcina umoya ucocekile, kunye nokucothisa imimoya enamandla. Ukutyala imiqolo yee-conifers ezinje nge-spruce eluhlaza okwesibhakabhaka okanye umthi we-tamarack kudala ukomelela, kwendalo Ipatio evaliweyo udonga olwamkela iindidi zeentaka kunye nezilwanyana zasendle.
Zithini izimvo zakho zebhloko oyithandayo? Sazise apha ngezantsi kwizimvo oza kwabelana ngazo. Funda ngakumbi iintlobo zeepatios kweli phepha.
Iivesi zebhayibhile malunga namadoda nabafazi
mawwiage yeyona nto isithandayo namhlanje